I-10 Acids eziqhelekileyo kunye neZakhiwo zeKhemikhali
Nalu uluhlu lwee-acids eziqhelekileyo ezilishumi. I-Acids yimizimba eyahlukana emanzini ukunikela i-hydrogen ions / protons okanye ukwamukela i-electron.
I-Acetic acid nayo yaziwa ngokuba yi-acid e-ethanoic. ULAGUNA DESIGN / Getty Izithombe
I-Acetic Acid: HC 2 H 3 O 2
Kwaziwa nangokuthi: i- asian ethanoic , i-CH3COOH, i-AcOH.
I-Acetic acid ifumaneka kwiviniga. I-asidi isoloko ifumaneka kwifom ye-liquide. I-acide acetic acid (i-glacial) idibanisa nje ngezantsi kweqondo lokushisa.
Le yile mveliso yamakhemikhali ye-boric acid: i-boron (i-pinki), i-hydrogen (emhlophe) kunye ne-oksijini (ebomvu). ULAGUNA DESIGN / Getty Izithombe
I-Acid Acid: H 3 BO 3
Kukwaziwa nangokuthi: i-acidum boricum, i-hydrogen orthoborate
I-asidi ye-Boric ingasetyenziswa njenge-disinfectant okanye i-pesticide. Ngokuqhelekileyo kufumaneka njengophophu omhlophe wesikriststine.
Le yile mveliso yeekhemikhali ye-carbonic acid. ULAGUNA DESIGN / Getty Izithombe
I-Carbonic Acid: CH 2 O 3
Kwaziwa nangokuthi: i-acididi ye-aerial, i-asidi yomoya, i-dihydrogen carbonate, i-kihydroxyketone.
Iisombululo ze-carbon dioxide emanzini (i-carbonated acid) ingabizwa ngokuba yi-carbonic acid. Le yodwa i-asidi ixutywe yimiphunga njengegesi. I-Carbonic acid iyinariti ebuthakathaka. Inoxanduva lokuphelisa i-calestone ukuvelisa iimpawu ze-geological ezifana ne-stalagmites kunye ne-stalactites.
I-asidi ye-Citric iyinxalenye ye-asidi ebuthakathaka efumaneka kwiziqhamo ze-citrus kwaye isetyenziswe njengendlela yokulondolozwa kwemvelo kunye nokunika ukunambitheka okumuncu. I-Atom zimelelwe njengezigaba kwaye zikhowudiweyo kumbala: i-carbon (grey), i-hydrogen (emhlophe) kunye ne-oksijini (ebomvu). ULAGUNA DESIGN / Getty Izithombe
I-Acit Acid: H 3 C 6 H 5 O 7
Yaziwa nangokuthi: 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid.
I-asidi ye-Citric ibuthakathaka obuthakathaka be-acid ebizwa ngokuba yi-asidi yemvelo kwizithelo zelitrus. Iikhemikhali yintlobo ephakathi kwimijikelezo ye-citric acid, eyona nto ibalulekileyo ekutheni i-aerobic metabolism. I-asidi isetyenziswe ngokubanzi njenge-flavouring and acidifier ekudleni.
Le yile mveliso yamakhemikhali ye-hydrochloric acid: i-chlorine (eluhlaza) kunye ne-hydrogen (emhlophe). ULAGUNA DESIGN / Getty Izithombe
I-Hydrochloric acid: i-HCl
Kwaziwa nangokuthi i-marine acid, i-chloronium, umoya wetyuwa.
I-Hydrochloric acid iyicacisi ecacileyo, ephezulu kakhulu. Itholakala kwifomu ehlanjululwe njenge-muriatic acid. Ikhemikhali inamashishini amaninzi kunye neebra. I-HCl i-asidi ifumaneka kwijusi yesisu.
Le yindlela yokwenza imichiza ye-hydrofluoric acid: i-fluor (i-cyan) ne-hydrogen (emhlophe). ULAGUNA DESIGN / Getty Izithombe
I-Hydrofluoric Acid : HF
Kwaziwa nangokuthi: i-hydrogen fluoride, i-hydrofluoride, i-hydrogen monofluoride, i-fluorhydric acid.
Nangona iyancipha kakhulu, i-hydrofluoric acid ibonwa njenge-asidi ebuthakathaka kuba ayisoloko idibanisa ngokupheleleyo. I-asidi iya kudla iilazi kunye neesinyithi, ngoko i-HF igcinwa kwiibhokisi zeplastiki. I-HF isetyenziselwa ukwenza i-fluor compounds, kuquka i-Teflon ne-Prozac.
Le yile mveliso yamakhemikhali ye-nitric acid: i-hydrogen (emhlophe), i-nitrogeni (eluhlaza okwesibhakabhaka) kunye ne-oksijini (ebomvu). ULAGUNA DESIGN / Getty Izithombe
I-Acit Acid: HNO 3
Kwaziwa nangokuthi: i-aqua fortis, i-azotic acid, i-acraver's acid, i-nitroalcohol.
I-asidi ye-nitric yomeleleyo yamaminerali acid. Ngendlela ecocekileyo, ngumbane ongenambala. Emva kwexesha, livelisa umbala ophuzi ukusuka ekuqhekekeni kwi-nitrogen oxides kunye namanzi. I-asidi ye-nitric isetyenziselwa ukwenza izibhamu kunye nee-inks kunye ne-oxidizer enamandla kwi-industrial and lab.
Le yile mveliso yamachiza ye-oxalic acid. Todd Helmenstine
I-Oxalic Acid : H 2 C 2 O 4
Kwaziwa nangokuthi: i-ethanedioic acid, i-hydrogen oxalate, ethanedionate, i-acidum oxalicum, i-HOOCCOOH, i-oxyric acid.
I-oxalic acid ifumana igama layo kuba liqale lodwa njengetyuwa e-sorrel ( Oxalis sp.). I-asidi ininzi ngokutya okuluhlaza, ukutya okunamagqabi. Kwakhona kufumaneka kwiinkampani zicocekileyo zetsimbi, iimveliso zokulwa ne-rust, kunye neentlobo ze-bleach.
I-Phosphoric acid iyaziwa nangokuthi i-orthophosphoric acid okanye i-phosphoric (V) i-acid. Ben Mills
I-Phosphoric Acid: H 3 PO 4
Kwaziwa nangokuthi: i-orthophosphoric acid, i-trihydrogen phosphate, i-acidum phosphoricum.
I-Phosphoric acid i-acide yamaminerali asetyenziswe kwimveliso yokucoca ekhaya, njenge-chemical reagent, njenge-inhibitor ye-rust, kunye ne-teeth enchant. I-phosphoric acid nayo ibaluleke kakhulu kwi-biochemistry.
Le yakhiwo yeekhemikhali ye-sulfuric acid.
I-acid ye-Sulfuric : H 2 SO 4
Kwaziwa nangokuthi: i- asidi yebhetri , ukutshiza i-acid, i-mattling acid, i-Terra Alba, ioli ye-vitriol.
I-asidi ye-Sulfuric iyindawo echanekileyo yamaminerali e-acid. Nangona ngokuqhelekileyo kucacisa ukuba kuluhlaza okwesibhakabhaka, kunokuthi kudaywe kumnyama ukuba uqaphele abantu ukuba bavelise. I-acid ye-sulfuric ibangela ukushisa okukhulu kweekhemikhali, kunye nokushisa okufudumeleyo ukususela ekukhuselweni kwamanzi. I-asidi isetyenziselwa kwiibhetri eziqhubela phambili, ukucoca i-cleaners kunye ne-chemical synthesis synthesis.
Kutheni sifundisisa iKemistry?
Indlela yokuguqula i-Farenheit kwiCelcius
Umzekelo weGesi oPhambili Ingxaki - Umqulu onguNye
Isakhiwo seNdlu seKamva? Parametricism
Ukuhlaziya uluhlu lokuhlola uluhlu oluchazayo
Iprofayile yoMculi: Thetha Intetho
Iimpawu ze-Iconic ezivela kwiNveveli 'Umthi ukhula eBrooklyn'
Indlela Yokugwema Ukulimala kwabaMculo
Ukusebenzisa 'A' Emva kweetenzi ngaphambi kokuba iifinfishing
Incwadi Yobunini: Inkcazo kunye nemizekelo
Inja enkulu kwiGalofu? Ngamanye amaxesha Ufumana ukuba Mla
AbantakwaboBrown: Ziziphi na?